Last updated: Oct. 12 2019 | 2 min akhri
Lahaanshaha xayawaanka waa labiska nolosha. Oo dhan kuwii ku caashaqay xayawaanka halkaas, waannu og nahay inaad run ahaantii resonate karaan toddobada runta hoose.
Runta #1: “Butros Sare”
Milkiilayaasha Butros guud ahaan waa kalsooni badan taasoo keentay in sare is-qabka. Xayawaanka shuruud la'aan jecel, salaama farxad, iyo fulin baahida aqbalaada, abuuraya a “salaaxid sare”, kaas oo sida milkiilaha xayawaanka, aad ogtahay in dareen in aan la garaaci karaan.
Runta #2: More Positive Outlook on Life
Marka fekerayo xayawaankaaga, ma waxay kaa caawin kartaa, laakiin ma ilka iyo ka fekeraan dhammaan siyaabaha ay u keeneen farxad gelin noloshaada. Xataa marka jeer waa adag, kalfadhiyada, hadane play saacad-dheer iftiimin aad maalin. Dhab ahaantii marka laga fekerayo xayawaankaaga, fikirrada xun Dusi iyagoo iyo positivity radiates jidhkaaga oo dhan.
Runta #3: Kelida No More
Xayawaanka sidoo kale waxay na siiyaan dareen lahaansho iyo na siiso jiritaanka a macno leh. The mas'uuliyadda iyo allabari oo loo baahan yahay lahaanshaha xayawaanka waxay u dhigantaa waxa oo dhan markii aannu u aragno oo ay dareemaan in shuruud la'aan ah, raaxada aad higsato ay bixiyaan.
Runta #4: Godka Rate Life iyo Relationships
The “salaaxid sare” in xayawaanka our tusi na ka dhigaysa isagoo nugul aan fiicneyn sida uu cabsi. Waayo, waxaynu og nahay in wax dhib ah maleh waxa dhaca, waxaa jira wax nool tiirsan na dul. Iyada oo xayawaanka’ nooca daryeelka iyo kalgacal, ee xayawaanka ku tiirsanaanta run tuso na siisaa rajo in furitaanka ilaa waa run ahaantii mudan in khatarta mar walba.
Runta #5: CAQIIDADA ee asxaabtiisa Soul
Iyada oo dhunkaday random in dhabta-fadhiya inay sugaya fajac Indhahooda, jacaylka aan shuruud lahayn xayawaanka siin siinayaa macnaha cusub in ay isku naf erayga. Waayo, kuwii ku caashaqi jiray xayawaanka iyo dunida, xayawaanka waa mid ka mid ah asxaabtiisa nafteenna. iyaga By “kaliya garanaya” marka waxaan u baahanahay qaar ka mid ah fiiro dheeraad ah ayaa xaqiijiyay in nafihiinna hadal kasta oo kale oo. Waa arinkii in xayawaanka our nagu furan iyo kala fikradda ah asxaabtiisa naf.
Runta #6: In Touch la kacyo
By dareenka, in ma tilmaamayso argaggaxsan qaylinaya ama joogto ah isbeddelo ah niyadda. Xayawaanka nolosheena siiyaan macne qoto by noo ogolaaneysa in ay aad ula xiriiri lahayd jilicsanaayeen, dareenka more saaxiib. Waxaan, sida milkiilayaasha xayawaanka, caadi ahaan waa in ka badan xamaasad leh oo ay awoodaan in ay si cad u muujiyaan fekerkaaga iyo dareenkaaga noo ma aha oo kaliya in ay xayawaanka, laakiinse kuwa kale iyo sidoo.
Runta #7: Xayawaanka Kaalay First
xayawaanka waa caruurteena. Laga soo bilaabo si joogto ah hadalka iyaga oo ku saabsan in lagu badbaadinayo kumanaan sawiro xayawaanka in ay iyaga daaweeyo sida dhallaanka, xiriirka naga dhexeeya iyo xayawaanka our aad uula mid tahay in waalidka ilmaha.